ShweMinThar: LogDog Ant- Hacker & Security - mDirectory - Myanmar Kyat Converter - Facebook Locked
LogDog Ant- Hacker & Security - mDirectory - Myanmar Kyat Converter - Facebook Locked
မိမိ အကောင့်တွေကို ဟက်ကာတို့ရဲ့ အနှောင့်အယှက်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ့့်  LogDog Ant- Hacker & Security APK
ဒီတစ်ခါ အရင် တင်ထားခဲ့ဖူးတဲ့ Apk လေး တစ်ခုပါ ဒေါင်းမရလို့ ပြန်တင်ပေးပါလို့ တောင်းဆို ထားကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေအတွက် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
မိမိ အကောင့်တွေကို ဟက်ကာတို့ရဲ့ အနှောင့်အယှက်ကိုကာကွယ်ဖို့ အတွက် LogDog Anti Hacker Security APK လေးပါ။
ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုရင် APK လေးကိုဒေါင်းယူပြီး မိမိတို့ ဖုန်းတွင် install ပြုလုပ်ပြီး Apk ရဲ့ ညာဘက်အပေါ်က + အပေါင်လက္ခဏာကို ကလိပေးပြီး
ကာကွယ်လိုတဲ့ Facebook, Gmail, Yahoo Mail, Blog, Dropbox, Box, စသည်များအနက် မိမိကာကွယ်ထားချင်တဲ့ဟာကို ရွေးလို့ ကလိပေးပြီး Login ဝင်ထားလိုက်ပါ
ထိုကဲ့သို့ မိမိကာကွယ်လိုတဲ့ Accounts များစွာအားလုံးကို နည်းတူ Login ဝင်ထားလိုက်ပြီး ဒီ Apk လေးကို ဖုန်းတွင်အမြဲဆောင်ထားလိုက်ပါ==> ဟက်ကာတွေ ဟက်လာခဲ့ရင် ထို
Accounts များကိုမဝင်ရောက်နိုင်ဘဲ ဝင်လာတဲ့ အန္တရယ်ကို ဖျက်သိမ်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ့ အသုံးလို့တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ဆောင်ထားကြပေါ့ဗျာ။
Download Here – http://www55.zippyshare.com/v/pkriR6cd/file.html
Or Download Here – http://www.solidfiles.com/v/P5ZjjDVKaY63p
Android ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် မြန်မာ Website နှင့် Blog ၆၀၀ ကျော်ကို စုစည်းထားတဲ့ mDirectory 1.0 Apk
Myanmar Mobile Directory ဆိုသည်မှာ Android ဖုန်းအသုံးပြုသူတိုင်းအတွက် ရွှေမြန်မာတို့၏ Webstite များ Blog များကို အလွယ်တကူ ဖတ်ရှုလေ့လာ
နိုင်ရန်အတွက် Website နှင့် Blog ၆၀၀ ကျော်ကို စုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လတ်တလော မြန်မာ နိုင်ငံတွင် ပေါ်ပြုလာ အဖြစ်ဆုံး ဖြစ်သော
လူကြည့်အများ Website နှင့် Blog များကို ဦးစားပေး ထည့်သွင်းထားပါသည်။ mDirectory တွင်ပါဝင်သော Website နှင့် Blog များမှာ -
1. တရာတော် Website များ (ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်)၊
2. မြန်မာ Bank Website များ
3. သတင်းဆိုင်ရာ Website များ
4. ရုပ်ရှင် နှင့် သီချင်း Website များ
5. အားကစား ဆိုင်ရာ Website များ
6. ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာ Website များ
7. ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ Website များ
8. မိုဘိုင်းဖုန်း နည်းပညာ Website များ
9. စာပေ၊ ဂျာနယ်၊ မဂ္ဂဇင်း Website များ ... ပါဝင်ပါတယ် ...
Download Here – http://www.solidfiles.com/v/YAVxL6qyyZw2x
ဖုန်းထဲ့မှာပင် နိုင်ငံတကာ ငွေ Change နှုန်းအတိုင်း တွက်ချက်ပေးနိုင်မယ့် Myanmar Kyat Converter Apk
Android OS နှင့် Tablet ချစ်သူများအတွက် မိမိ ဖုန်းထဲ့မှာပင် နိုင်ငံတကာ ငွေ Change နှုန်းအတိုင်း တွက်ချက်ပေးသော Myanmar Kyat Converter Apk လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ Application ထဲ့မှာ တွက်ချက်ပေးနိုင်သော နိုင်ငံများကတော့
ASEAN နိုင်ငံများ USA ၊ England ၊ Euro ၊South Korea ၊ Japan တို့ဖြစ်ပါသည်။
Download Here - http://www.solidfiles.com/v/65N3zvkYK553Z
နာက်တစ်ဆင့်မှာ Trusted Contacts စွမ်းဆောင်ချက်က သင့်ကို ဘယ်လို ကူညီပေးနိုင်လဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးမှာပါ။ Choose Trusted Contacts ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
နာက်အဆင့်မှာ No longer have access to these? ကို နှိပ်ပါ။
နာက်အဆင့်မှာတော့ သင့်ရဲ့ Password ကို Reset လုပ်လို့ ရပါပြီ။ Password အသစ်တစ်ခု ထည့်ပေးပြီး Continue ကိုနှိပ်ပါ။